I Apple Inc., izay nitondra ny anarana taloha hoe Apple Computer, Inc., dia orinasa amerikanina manana zanak'orinasa erak'izao tontolo izao izay manamboatra ary mivarotra entana elektrônika ho an'ny daholobe, solosaina ary rindrankajy. Ireo entana malaza indrindra novarotan'i Apple dia ny Macintosh (karazana solosaina varotan'i Apple), ny iPod, ny iPhone ary ny iPad (ankehitriny) ; misy koa ny mpandrindra milina Mac OS X ary ny iOS, ny mpamaky aino aman-jery iTunes, ny rindrankajy fampiasa amin'ny birao iWork, ny vondron-drindrankajy iLife, ary rindrankajy hafa ho an'ny mpiasa toy i Final Cut Pro ary Logic Pro.
Tamin'ny taona 2010, ny isan'ny mpisa ao amin'i Apple dia 46 600. Ny vola mididtra isan-taona dia eo amin'ny 65,2 miliara dollar. Ny tranombarotra Apple izay mitondra ny anarana Apple Store, dia misy eo amin'ny 301, anaty firenena folo. Eo amin'ny aterineto indray dia misy tranombarotra am-bohikala izay ivarotra fitaovana ary rindrankajy namboarin'i Apple ary namboarin'ny orinasa hafa.
Noforonin'i Steve Wozniak ary Steve Jobs i Apple ny 1 Aprily 1976 tany Cupertino (Kalifornia), ilay marika dia lasa nivadika orinasa ny 3 Janoary 1977 ary nitodra ny anaarana Apple Computer Inc., fa tamin'ny faha-30 taona ny namoronana ilay orinasa Apple dia nesorina ilay anarana hoe "Computer" satria efa tsy solosaina irery intsony no varotan'i Apple.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple&oldid=973022"
Dernière modification le 10 Aogositra 2019, à 15:40
Voaova farany tamin'ny 10 Aogositra 2019 amin'ny 15:40 ity pejy ity.